Apple ee macruufka 8 keenay wax badan oo dhibaato ah u isticmaala iPhone, iPod, iyo iPad. Dadka qaatay boqolaal doolar ku iibsigu iPhone 6 iyo iPhone 6 lagu daray, laakiin helay dhibaatooyin dhowr ah oo la xiriira batari, Wi-Fi, iyo Bluetooth in qalabka ay. Later, khubaro soo jeediyay in macruufka 8 update lahaa cayayaanka qaar ka mid ah, iyo Apple qaaday daryeelka iyaga ka mid ah oo lagu sii daynayo macruufka 8.2 iyo 8.3 update. Bal aynu eegno qaar ka mid ah arrimaha guud ee qalabka ku ordi macruufka 8.
1. Dhibaatooyinka wajahay halka xira macruufka qalab qalab isugu yeedhayso gacan-ku oo bilaash ah
Khubarada oo malaayiin macruufka isticmaala qalab tilmaamay in mararka qaarkood, ay qalab macruufka ah si fudud ku guuldareysto in la abuuro xiriir sax ah qalab isugu yeedhayso gacan-ku oo bilaash ah sida Bluetooth karti samaacado wireless, iyo hidi nidaamka gacmo-free phone baabuurka wacaya. Dhibku jiro iyo isku xirnaanta Bluetooth ayaa sidoo kale waxa ay keentey in wac dhibciyo halka isticmaalaya gacan-ku oo bilaash ah.
2. Dhibaatooyinka in qalabka ku xirmaya ku hadla Bluetooth
Dad badan ayaa habited in ay ku xidhmaan ay iPhone, iPad, iPod oo la hadla dibadda via Bluetooth iyo qulquli music badan Spotify. Laakiin is beddel joogto ah ee isku xirnaanta Bluetooth galisa loo maqli karo maqal iyo saamaynta guud ahaan tayada codka.
3. Dhibaatooyinka in laysku xiro nidaamka audio baabuurka
Dhowr isticmaalka sheegay arrintan si degdeg ah dib markii la bilaabay ee macruufka 8. Users ay awoodaan in ay ku xidhmaan taleefannadooda Android nidaamka audio baabuurka, laakiin ma ay awoodaan in ay ku xirmaan macruufka 8 qalabka ku shaqeeya. Reboot ama dib-u-dejinta goobaha buluug ilig sameeyey bixiyaan gargaar ku meel gaar ah, laakiin dhibaatada ku hayaa ku soo noqnoqda. Apple si guul qaatay daryeelka ee arrintan ku macruufka 8.3 update sida inta badan isticmaala.
4. Dhibaatooyinka iPod, iPad xirmaya keyboard Bluetooth
Dhowr users keyboard Bluetooth dhibaatooyin ka shaqeeyo teebabka wireless sheegay ka dib markii uu ku rakibidda macruufka sideed in qalabka ay. Deminta feature voiceover xallin karaa arrintan. Ilo ay soo jeedinayaan in Apple sameeyey updates qaar ka mid ah sii daayo in ay is ogow of arrintan ee macruufka 8.2 iyo 8.3.
5. Dhibaatooyinka in laysku xiro nidaamka quful smart baabuurka
Dadka isticmaala iPhone soo jeedinaya in mararka qaar ay ka waaban la isticmaalayo nidaamka ay quful smart sida August qufulka smart u saamaxaya in ay qufulka gaari furo adigoo isticmaalaya muhiim ah dalwaddii in ay iPhone. Qufulada Smart phone xirmaan isticmaalaya feature Bluetooth, iyo dhibaatooyin ka Bluetooth ama isku xirnaanta Bluetooth daciif ah ku qasbi karta inay wiat baabuur dibadda daqiiqo severl.
Users Waxay kuwaani sheegayaan in mararka qaar qalab macruufka ah ka shaqeeya si tartiib ah, ama Bluetooth si fudud ku guuldareysto in ay ku xidhmaan nidaamka ammaanka. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, inta badan isticmaala iPhone uma sheegin arrintan ka dib markii rakibidda macruufka 8.3 update.
6. Bluetooth xirnaanta nidaamka audio baabuurka uu ineysan halka wacay
Tani waa dhibaato kale oo caadi ah ay soo sheegeen macruufka isticmaala qalab, laakiin ka dib markii fudud tallaabooyinka dhib-toogashada waxaa laga yaabaa in ku filan si ay u xaliyaan arrintan caddeeyo.
7. iPhone, iPad iPod ama si fudud ku guuldareysto in ay ku xidhmaan la aaladaha kale ee Bluetooth
Aaladaha kale ee ka muuqan karaan natiijooyinka raadinta Bluetooth, laakiin qalab macruufka ah si fudud ku guuldareysto in ay ku xidhmaan qalab kale.
8. Dhibaatooyinka in laysku xiro nidaamka navigation
Bluetooth GPS-dejiyeyaasha aqbalana dhawaan sheegay in qaateyaasha qaarkood ma awoodaan in ay ku xiran aaladaha Apple ee ka shaqeeya macruufka sideed. ForeFlight sidoo kale waa mid ka mid ah shirkadaha kuwa. Khubarada ayaa soo jeedinaya in Apple ayaa ka shaqaynaysa dhibaatadan oo laga yaabaa inay qaadato daryeelka of this in ay set soo socda ee updates.
Sida loo xaliyo arrimaha Bluetooth
• Ku rakib ee macruufka version ugu dambeeyey
Hubi in qalabka macruufka leeyahay macruufka version dambeeyay. Kan ugu danbeeyay waxa uu ahaa 8.3 macruufka sii daayay bishii April 2015. update Tani waxay bixisaa qaar ka mid ah gargaarka in dadka isticmaala oo qalab ayaa soo food saartay xirnaanta Bluetooth arrimaha la xiriira. Macruufka isticmaala qalab ayaa sheegay in shirar kala duwan in ay qalab ka shaqeeya wanaagsan afhayeenka Bluetooth tan iyo ku rakibidda macruufka 8.3 update.
Wararka ayaa sheegaya in cayayaanka kale CarPlay la xiriira in uu keeno keyboard ay si joogto ah pop-up ayaa ka hadlay 8.3 update. Ma Gacan-free taleefan oo u badan yihiin is goyso.
• Hubi haddii qalab kale oo ay awoodaan in ay ku xirmaan hababka Bluetooth baabuurka
Qalabka macruufka waxay noqon karaan qaar wadayaal kiisaska intooda badan, laakiin waxaa lagu talinayaa in aad ka fikirto hab kale agagaarka sidoo.
Haddii aadan awoodin in ay ku xidhmaan qalab macruufka la gaariga ee loo dhisay hab gacan-ku oo bilaash ah ama nidaamka audio, talaabada ugu horeysa waa in aad qaado waa in ay isku dayaan xira macruufka aad la aaladaha kale ee sida Bluetooth headset, iwm Haddii aad dareentid in aad iPhone, iPad ama iPod ay awoodaan in ay ku xirmaan qalab kale marka laga reebo baabuurka gacan-ku oo bilaash ah, waa in aad hubsataa gacan-ku oo bilaash ah habka aad gaariga ee ee goobaha Bluetooth.
• reboot qalab macruufka iyo isku day dib daarin
Rebooting qalabka waa habka ugu fudud in ay kala saaraan dhowr arrimood ee ma ahan oo keliya qalabka macruufka, laakiin telefoonada kale iyo kiniiniyada iyo sidoo.
Marka hore, ka heli qalab Bluetooth ku jira liiska aan awoodin in ay ku xirmaan aad iPhone, iPad, iPod ama. Markaas, riix magaca qalab ee liiska ah, oo guji "illoobin qalab this" doorasho.
Dami aad macruufka qalab ee Bluetooth. Guuleysatey qalab aad, iyo dhawro on shan daqiiqo. Markaas, shid Bluetooth mar kale, oo ha macruufka aad ka raadi qalab kale Bluetooth (gacmo-free nidaamka audio, baabuur ama kale Bluetooth wax qalab karti). Marka magaca qalabka walaacsan u muuqataa in liiska, si fudud isku dayaan in ay xidhmaan.
Haddii arrinta ma heli soocaa ka gaareen dhammaan tallaabooyinka dhib, doorasho labaad dambeeya waa in la tirtiro xogta oo dhan ka qalab aad, iyo in la soo celiyo qalabka la isticmaalayo iCloud ama Lugood. Haddii ay tani sidoo kale caawin waydo, fursad u dambeeya waa in la qaato qalab aad ee Apple ayaa warbaahinta ama xarunta adeega idman.
Waxaad Weli ma garanayno: 5 Features Cool in Apple ma ku dhawaaqo in macruufka 9
> Resource > macruufka > Solutions for Bluetooth arrimaha la xiriira ee Qalabka shaqada macruufka 8